डाइटिङको चक्करमा लाग्दा यि २३ वर्षे युवतीको भयो बेहाल – Online Nepal Site
तपाईसँग पैसा टिक्दै टिकेन ? अपनाउनुहोस यस्तो उपाय, चमत्कारीक बचत हुनेछ
बिबाहको अन्तिम साँझ चर्कित गायिका नेहा कक्कडले दुनियाँको ध्यान खिचिन्
अचानक के भयो ? सियाना श्रेष्ठको आमा रुँदै मिडियामा आइन् (भिडियो हेर्नुस्)
दियो बाल्दा सधै ध्यान राख्नुहोस् यी ५ कुरा, मिल्छ चमत्कारी फल
बिहेको मण्डप मै यस्तो सम्म हुँदा उपस्थित भएका सबै परे चकित।
दुबई पुगेर यसरी खुलिन् अदिती, हेर्नुहोस् तस्बिर
भोलि बिहे गर्दै नेहा, परिवारसहित दिल्ली पुगिन् !
मुख्य पृष्ठ /Intresting/डाइटिङको चक्करमा लाग्दा यि २३ वर्षे युवतीको भयो बेहाल
डाइटिङको चक्करमा लाग्दा यि २३ वर्षे युवतीको भयो बेहाल
एजेन्सी । तपाईलाई स्लिम बन्ने चक्कर कति चल्छ ? स्लिम बन्ने चक्करमा तपाई डाइटिङमा लाग्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ला है ? डाइटिङको चक्करमा लागेर पातलो बन्न खोज्दा अमेरिकाको न्युयोर्ककी स्टेफनी रोड्जले अत्यधिक डाइटिङ गर्दै जाँदा उनको स्वास्थ्यमा नै ठूलो समस्या देखियो ।
स्टेफनी रोड्ज १३ वर्षकी हुँदा धेरै मोटी भएका कारण उनी र उनको परिवार नै चिन्तामा डुब्यो । त्यसपछि उनले लहडमै डाइटिङ शुरु गरिन् र खाना नखाने जुनून रोगमा परिणत भएपछि अहिले २३ वर्षकी हुँदा जम्मा २४ किलो तौल भएपछि अस्पताल नै भर्ना हुनुपरेको छ ।
लगातारको डाइटिङ धेरै वर्षपछि रोकेपनि उनको दुब्लो हुने क्रम नरोकिएपछि ठूलो समस्या देखियो । पछिल्ला दिनमा स्टेफनीलाई उदाहरण दिएर चिकित्सकहरूले डाइटिङ गर्दा हुने नोक्सानीका बारेमा मानिसहरूलाई सचेत गराउने गरेका छन् । जुन कुरा तपार्य हामीले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
भगवानलाई चढाएको फूल कसरी सेलाउने ? हिन्दुधर्ममा यस्तो छ विश्वास